ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံကိုသာဝတ်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံကို ပျော်ရွှင်စွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲ - Mckzone Daily
ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံကိုသာဝတ်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံကို ပျော်ရွှင်စွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲ
မင်္ဂလာဆောင်အကြိုဓာတ်ပုံများအကြောင်းပြောတဲ့အခါ လူတွေက သတို့သမီးက ပန်းတစ်ပွင့်နဲ့ အဖြူရောင်ဂါဝန်ဝတ်ထားပြီး သတို့သားက ခန့်ညားတဲ့ ဝတ်စုံများနဲ့ တောက်ပတဲ့အချစ်ငှက်တစ်စုံဆိုပြီး စဉ်းစားတက်ကြပါတယ် ။ ဒါပေမဲ့ Kyra နဲ့ Patrick အမည်ရှိ ဖိလစ်ပိုင်မှ စုံတွဲတစ်တွဲက ၎င်းတို့ရဲ့ pre-wedding ရိုက်ကူးမှုကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးနဲ့ ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် ။ သူတို့က ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံများကို ဝတ်ဖို့ ရွေးလိုက်တယ်ပါတယ် ။ ဒါက ချစ်စရာကောင်းပြီ. ထူးခြားတဲ့စိတ်ကူးတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ပျံ့နှံ့သွားပြီး netizens တွေဆီကနေ အာရုံစိုက်မှုတော်တော်ရခဲ့ပါတယ် ။
pre-wedding ရိုက်ကူးမှုကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် မေလမတိုင်မီ လအနည်းငယ်အလိုမှာ ပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်း ယခုအချိန်ထိ အာရုံစိုက်ခံရဆဲပါ ။ ၎င်းက ကြည့်ရှုရန် အလွန်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ဓာတ်ပုံများဖြစ်ပြီး သူတို့စုံတွဲနှစ်ဦးဟာ ဂုဏ်ပကာသန တွေ လှပမှုတွေမလိုဘဲ ချစ်ချင်းမေတ္တာကိုသာ လိုအပ်ကြောင်းကို နားလည်မိခဲ့ပါတယ် ။
Reference : worldofbuzz
မင်ျဂလာဆောငျအကွိုဓာတျပုံမြားအကွောငျးပွောတဲ့အခါ လူတှကေ သတို့သမီးက ပနျးတဈပှငျ့နဲ့ အဖွူရောငျဂါဝနျဝတျထားပွီး သတို့သားက ခနျ့ညားတဲ့ ဝတျစုံမြားနဲ့ တောကျပတဲ့အခဈြငှကျတဈစုံဆိုပွီး စဉျးစားတကျကွပါတယျ ။ ဒါပမေဲ့ Kyra နဲ့ Patrick အမညျရှိ ဖိလဈပိုငျမှ စုံတှဲတဈတှဲက ၎င်းငျးတို့ရဲ့ pre-wedding ရိုကျကူးမှုကို သူတို့ကိုယျသူတို့ရဲ့ စိတျကူးနဲ့ ဖနျတီးခဲ့ပါတယျ ။ သူတို့က ဒိုငျနိုဆောဝတျစုံမြားကို ဝတျဖို့ ရှေးလိုကျတယျပါတယျ ။ ဒါက ခဈြစရာကောငျးပွီ. ထူးခွားတဲ့စိတျကူးတဈခုဖွဈတာကွောငျ့ သူတို့ရဲ့ဓာတျပုံတှဟော ကယျြကယျြပွနျ့ပွနျ့ပြံ့နှံ့သှားပွီး netizens တှဆေီကနေ အာရုံစိုကျမှုတျောတျောရခဲ့ပါတယျ ။
pre-wedding ရိုကျကူးမှုကို ၂၀၂၁ ခုနှဈ မလေမတိုငျမီ လအနညျးငယျအလိုမှာ ပွုလုပျခဲ့သျောလညျး ယခုအခြိနျထိ အာရုံစိုကျခံရဆဲပါ ။ ၎င်းငျးက ကွညျ့ရှုရနျ အလှနျပြျောစရာကောငျးတဲ့ ဓာတျပုံမြားဖွဈပွီး သူတို့စုံတှဲနှဈဦးဟာ ဂုဏျပကာသန တှေ လှပမှုတှမေလိုဘဲ ခဈြခငျြးမတ်ေတာကိုသာ လိုအပျကွောငျးကို နားလညျမိခဲ့ပါတယျ ။
Be the first to comment on "ဒိုင်နိုဆောဝတ်စုံကိုသာဝတ်ပြီး ရိုးရှင်းတဲ့ pre-wedding ဓာတ်ပုံကို ပျော်ရွှင်စွာ ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ စုံတွဲတစ်တွဲ"